Kaydinta Borg: Nidaam Maareyn Maareyn Wanaagsan | Laga soo bilaabo Linux
Kaydinta Borg: Nidaam Maareyn Wanaagsan
Linux Post Ku Rakib | | Aplicaciones, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhammaan user, mid noqo caam ah, horumarsan ama farsamo leh, waa inaad isku daydaa inaad haysatid Nidaamyada hawlgalka, kaliya lama cusbooneysiin, laakiin sidoo kale waa laga ilaaliyaa hanjabaadaha internetka iyo dhacdooyinkasida fayraska, faragalinta aan la fasaxin, waxyeelada qalabka, iyo qayb ahaan ama wadarta luminta xogta, warbaahinta kaydinta
Dhibaatadan ugu dambeysay ee la soo sheegay, way badan yihiin qalabka software (barnaamijyada / codsiyada) laga heli karo kuweenna Nidaamyada hawlgalka bilaash ah oo furan, oo ku saleysan GNU / Linux. Oo midkood ayaa loo yeedhay Kaabta Borg, Waa wax fiican nidaamka maareynta keydka.
Iskusoo wada duuboo, arinta keydinta ama keydinta, ama qaab kasta oo kale oo loogu talagalay «Dib-u-dejin, dib-u-soo-cesho, soo-ceshano ama si fudud ugu noqo xaalad bilow ah ama tii ugu horreysay GNU / Linux Distros»Marka lagu daro macluumaadka (shaqsi ama shaqo) la keydiyay, badanaa waa qodob aad muhiim ugu ah dadka isticmaala GNU / Linux, maadaama guud ahaan, ay si joogto ah u tijaabinayaan qaabab cusub ama codsiyo, iyo kuwo kale oo xilliyaysan, GNU / Linux Distros cusub xilliyo.
1 Qoraallada la xiriira
1.1 Ogeysiis Muhiim ah oo ku saabsan Kaydinta
2 Borg Backup: Nidaamka Maareynta Kaabta
2.1 Waa maxay Borg Backup?
2.2 Muuqaalada iyo Wararka
2.2.1 Astaamaha ugu muhiimsan
2.3 Xog kale oo muhiim ah
2.4 Waa maxay ku-celcelintu?
Qoraallada la xiriira
Sababta sababta, ee Blog Laga Bilaabo Linux Waxaan horey u sameynay qoraallo kale oo laxiriira mowduucan oo aan kugula talineyno raadinta iyo akhriska. Muunad yar oo ka mid ah qaarkood waa kuwan soo socda:
Dib u dejiye: Sidee loo cusbooneysiiyaa Debian / Ubuntu ku saleysan Distros?
Rescuezilla 1.0.5.1: Nooca cusub ee la heli karo laga bilaabo Maarso 2020
Dib-u-habeyn: Kaabta, Soo Celinta Nidaamka iyo waxyaabo kaloo badan
Sidee loo sameeyaa Xog Xog ah oo ku jirta Qalabka adoo adeegsanaya qoraalka Shell?
Kuwa kale barnaamijyo xiiso leh oo waxtar leh, kuwaas oo xusid mudan: Deja Dup, Rsynciyo Aptik.
Ogeysiis Muhiim ah oo ku saabsan Kaydinta
Markaad sameyneyso howlo ama howlo gurmad ah, si aad u ilaaliso macluumaadkayaga (xogta) iyo Nidaamyada Howlgalka, dhaqamada wanaagsan ee ku saabsan mowduucan, badanaa kuwa kale oo badan, waxay xoogga saaraan sharciga loo yaqaan «3-2-1 ″, sababtoo ah waxay dejineysaa mabaadi'da soo socota si ay ugu hoggaansamaan:
Hayso ugu yaraan saddex (3) nuqul nuqul oo ah wax kasta oo la kaydiyo.
Ku hayso ugu yaraan laba (2) nuqul meelo kala duwan oo gudaha ah.
Ku ilaali ugu yaraan hal (1) keydkaaga meel ka baxsan goobta.
Borg Backup: Nidaamka Maareynta Kaabta
Waa maxay Borg Backup?
Kaabta Borg, sida ay sheegeen horumariyeyaashooda website-ka rasmiga ah, waa:
"Barnaamij nuqul nuqul ah. Ikhtiyaar ahaan, waxay taageertaa riixitaanka iyo xaqiijinta sirta. Ujeeddada ugu weyn ayaa ah inay bixiso hab hufan oo ammaan ah oo lagu sameeyo nuqullo xog ah oo kayd ah. Farsamaynta nuqul-sameynta xogta ee la adeegsaday ayaa Borg ka dhigaysa mid ku habboon keydka maalinlaha ah maadaama keliya isbeddelada la keydinayo Farsamaynta sirta la sugay ayaa ka dhigaysa mid ku habboon taageerida bartilmaameedyada aan la aamini karin".
Muuqaalada iyo Wararka
Kaydinta meel disk ku ool ah: Waxay qabataa soo-saarid ku saleysan guntin lagu qeexay nuxur ahaan taas oo loo adeegsado yareynta tirada baaystaha la kaydiyo: halkaasoo feylal kasta loo qaybiyay dhowr qaybood oo dherer dhererkoodu kala duwan yahay oo keliya qaybo aan waligood lagu darin lagu daro keydka. horay loo arkay.
Xawaare: Waxay leedahay waxqabad aad u fiican maxaa yeelay nambarkiisa waxqabadka-muhiimka ah waxaa lagu hirgeliyaa C / Cython, wuxuu sameeyaa faylka maxaliga ah / keydinta xogta, wuxuuna sameeyaa si hufan u ogaanshaha feylasha aan la badalin.
Sirta xogta: Kuu ogolaanayaa inaad ilaaliso dhammaan xogta adoo adeegsanaya AES 256-bit encryption, halka sharafta iyo xaqiiqada xogta la xaqiijiyay iyadoo la adeegsanayo HMAC-SHA256. Xogta ayaa lagu kaydiyaa dhinaca macmiilka.
Cadaadiska: Ikhtiyaar ahaan wuxuu fududeeyaa isku-soo-ururinta dhammaan xogta, qaababka soo socda: lz4 (super fast, compression low), zstd (baaxad ballaaran oo ka socda xawaare sare iyo riixitaan hoose ilaa riixitaan sare iyo xawaare hoose), zlib ), iyo lzma (xawaare yar, riixitaan sare).
Keydinta dibedda: Kuu ogolaanayaa inaad ku kaydiso xogta goob kastoo marti ah oo fog oo laga heli karo SSH. Intaa waxaa sii dheer, waxay awood u siineysaa kaydinta in lagu dhajiyo nidaamyada faylka.
Rakibo Easy on dhufto ee kala duwan: Waxay bixisaa laba-binleyaal (rakibayaal) aan u baahnayn in la rakibo, oo kaliya la isticmaalo oo loo isticmaalo, barnaamijyadan: Linux, Mac OS X, FreeBSD, iyo kuwo kale, sida Windows 10 Linux Subsystem (Foom tijaabo ah).
Free iyo software furan: Waxaa lagu sharciyeeyay shatiga BSD (faqradda 3).
Waxay hadda maraysaa nambarka nambarka 1.1.1, kaas oo keenaya waxyaabo badan oo cusub soo socda:
Waxaa ka mid ah hagaajinta habka hijrada laga bilaabo Borg 1.0.x ilaa 1.1.x
Waxay ka saareysaa baaritaanka WSL (Windows 10 Subsystem ee Linux).
Waxay u cusbooneysiisay xirmada lz4 nooca 1.9.2 iyo zstd xirmada nooca 1.4.4
Kudar taageerada tiirarka iyadoon os.link la socon (tus. Android leh Termux)
Waxay ku dareysaa taageerada barnaamijyada Linux bilaa sync_file_range.
Xog kale oo muhiim ah
para Kaabta Borg, oo ah barnaamij Goob -joogga (CLI) ayaa la abuuray Isdhexgalka shaxanka (GUI) si fiican loogu isticmaalo. Kuwaas waxaa ka mid ah:
borgweb: Loogu talagalay Linux
Macmiilka Kaabida Vorta: Loogu talagalay Linux, MacOS iyo Windows.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan borgweb y codayn waad booqan kartaa boggooda GitHub. Si kastaba ha ahaatee, BorgWeb leeyahay a keyd kale iyo kuwa kale bogga ku habboon taasi waxay dhawaan soo bandhigi doontaa macluumaad badan oo ku saabsan.
Waa maxay ku-celcelintu?
Waa farsamo gurmad ah waxay tirtireysaa xogta badan ee keydsan, xafidaada hal nuqul oo isku mid ah oo xogta ah, iyo ku badalida nuqulada xad dhaafka ah tilmaamayaasha tilmaamaya hal nuqul. Sidaa darteed, farsamadan waxay keydineysaa feylka hal jeer oo kaliya waxayna kuwa kale ku badashaa xiriiriye feylkaas, ama tilmaame tilmaamaya nuqulkan keli ah. Nidaamkani wuu guuleystaa keydso booska ay hayaan, taas oo hagaajinaysa isticmaalka booska iyo kharashyada laxiriira warbaahintaan, marka lagu daro fududee soo kabashada xogta dhaqsaha ah nuqul (keyd).
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Borg Backup», nidaam maamul oo lacag la’aan ah oo furan oo furan, aadna isu dheelitiran oo wax ku ool ah; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Iyo wixii macluumaad dheeri ah, ha ka waaban inaad booqato midkoodna Maktabadda internetka sida OpenLibra y JEDIT in la akhriyo buugaag (PDF) mowduucan ama kuwo kale meelaha aqoonta. Hada, hadaad jeceshahay tan «publicación», ha joojin inaad la wadaagto kuwa kale, adiga Websaydhada aad jeceshahay, kanaallada, kooxaha, ama bulshooyinka ee shabakadaha bulshada, doorbidayaa bilaash oo u furan sida Mastodon, ama amaan ah oo gaar loo leeyahay telegraam.
Ama si fudud u soo booqo boggayaga hoyga at Laga soo bilaabo Linux ama ku biir Channel-ka rasmiga ah Telegram ka FromLinux in loo akhriyo loona codeeyo tan ama daabacado kale oo xiiso leh «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux» iyo mowduucyo kale oo la xiriira «Informática y la Computación», iyo «Actualidad tecnológica».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Kaydinta Borg: Nidaam Maareyn Wanaagsan
AMD iyo Samsung: isbahaysi si loo horumariyo ciyaaraha ka socda Android